आर्किटेक्टको दृष्टिकोणमा दिगो विकास : सन्दीप डाेटेल-Setoghar
सन्दीप डाेटेल, प्रबन्ध निर्देशक, ड्रिम डेभलपर्स प्रा.लि
वातावरण अनुकुल हुनुपर्छ विकास कार्य
कु्नै पनि विकास कार्य अघी बढाउने क्रममा त्यसले वातावरणलाई प्रभावित पार्नुहुँदैन । अबका दिनमा नेपालमा निर्माण हुने भौतिक संरचनाहरु वातावरणमैत्रीग्रिन टेक्नोलोजीमा आधारित हुनुपर्छ । विश्वव्यापी रुपमा मानिसहरु वातावरणीय पक्षमा सचेत बन्दै गइरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि यस किसिमको अभ्यासमा हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको छ ।
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा सचेत बन्नु जरुरी
जलवायु परिवर्तन बदलिँदो परिस्थितिमा एक चिन्ताको विषय बनेको छ । ग्लोबल वार्मिंग (Global Warming) र यसको गम्भीर प्रभाव वातावरणमा पर्न सक्ने कुरालाई विचार गर्दै अबको विकास वातावरणमैत्री र दिगो विकासमा आधारित हुनु जरुरी छ । विश्वबजारमा यसको लागि विभिन्न प्रविधिहरु विकास भएका छन् । स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग र ऊर्जा बचतलाई समेत विचार गर्दै भवन निर्माण गर्ने कार्य पछिल्लो समय नेपालमा समेत शुरुवात भएको छ । ग्रिन टेक्नोलोजीमा आधारित होटल सोल्टी वेष्टर्न प्रिमियर नेपालगञ्ज’ यसको एउटा उदाहरण हो । पुल्चोक क्याम्पस भित्र निर्माण गरिएको ‘सेन्टर फर इनर्जी स्टडिज (CES) नामक बिल्डिङ पनि यही प्रविधिमा आधारित छ । यसको अलावा धरान, सानेपा, बुटबल लगायतका केही क्षेत्रमा यो प्रविधिको प्रयागमा मानिसहरु जागरुक बन्दै गएको पाइन्छ ।
नेपालको परिप्रेक्ष्यमा ग्रिन टेक्नोलोजीमा आधारित भवननिर्माण कार्य तुलनात्मक रुपमा अलि महँगो पर्न जान्छ । यसकारण यस प्रविधिमा आधारित भवन निर्माण कार्य सर्वव्यापक भने बनिसकेको छैन । यद्यपि वातावरणमैत्री यस्ता भवनहरुको निर्माण कार्यमा राज्य पक्ष विशेष योजना सहित अघी बढ्नुपर्ने देखिन्छ । पछिल्लो समय वातावरणीय प्रभावलाइ नेपालले समेत गम्भीर रुपले लिन थालेको छ ।
क्लिन इनर्जीमा जानुपर्छ :
अब वातावरणमैत्री तवरले विकास कार्य अघी बढाएमात्र सबै जीवित प्राणीको जीवनरक्षा हुने अवस्था छ । यसको निम्ति नवीकरणीय ऊर्जा पनि एक महत्वपूर्ण पक्ष हुन जान्छ । यसको अर्को पक्ष पनि छ, एउटा अध्ययनले देखाएअनुसार अबको करिब ५० बर्ष भित्रमा विश्वभरबाट पेट्रोलियम पदार्थका खानीहरु रित्तिने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा स्वच्छ वैकल्पिक ऊर्जामा जान ढिलाई गर्नुहुँदैन ।
सरकारी निकायले के गर्नुपर्छ ?
हरेक सरकारी भवन लाई Energy Efficient र वातावरणमैत्री बनाउने पहल सबै निकायबाट आजैबाट शुरु गरियो भने वातावरणमैत्री अभियानको शुरुवात गर्न सकिन्छ । यसकारण वातावरणमैत्री Climate Smart Building बनाउने अभियान अब सरकारी क्षेत्रबाटै पहल शुरु गरिनुपर्छ ।
कसरी हुनुपर्छ अबको विकास ?
नेपालमा अहिलेको अवस्थामा भौगोलिक अवस्थिति अनुसार सबै क्षेत्रमा मानिसहरुको बसोबासको अवस्था समेत एकै किसिमको छैन । जसले गर्दा कुनै गाउँको टुप्पोमा रहेका ५ ओटा घरलाई लक्षित गरी लागत अत्यधिक पर्ने किसिमले सडक एवं अन्य पूर्वाधारको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था छ । यद्यपि यसरी विकास कार्य अघी बढाउँदा त्यसबाट पर्न जाने लागत एवं वातावरणीय प्रभावलाई विचार गर्दै बेँसी वा होचो क्षेत्रमा (जहाँ खानेपानी, सडक, विद्युत, अस्पताल लगायतको सहज पहुँच पुर्याउन सकिन्छ) सामुहिक बस्ती स्थापना गर्ने र अग्ला डाँडाहरुको संरक्षण हुने किसिमले वातावरण अनकुल र आर्थिक लाभयुक्त वस्तुहरु उत्पादनको लागि प्रयाश गर्नुपर्छ । यसको साथै आगामी दिनमा लागत, समय र प्रभावकारितालाई विचार गरेर कतिपय ठाऊँमा सडक यातायातको विकल्प समेत खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ । कतिपय ठाऊँमा सडक यातायातको वैकल्पिक साधनको रुपमा केवुलकार एवं जल यातायातलाई प्रवद्र्धन गर्नसके सस्तो र सहज हुन सक्ने अवस्था पनि छ ।
किन सफल हुँदैनन् नेपालका विकास आयोजनाहरु ?
नेपालमा अघी बढाइएका ठूला विकास आयोजनाहरुमा विभिन्न अवरोधहरु देखिँदै आएका छन् ।आयोजनाको अध्ययन पश्चात् उक्त आयोजना कसरी सम्पन्न हुँदैछ भन्ने सम्बन्धमा शुरुमा उक्त आयोजनासँग सरोकार राख्ने सम्बन्धित क्षेत्रका नियामक निकायका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुले त्यसको प्रभावकारिता, महत्व र निर्माण प्रक्रियामा कुनै चासो नराखी मौन रहने तर सोही डिजाइन बमोजिम निर्माण सम्पन्न भएपश्चात् भने उक्त आयोजनाको डिजाइन नै गलत रहेको भनी प्रतिक्रिया दिने प्रचलन अत्यधिक रहेको पाइन्छ ।
ठेक्कापट्टाहरुको अनुगमन पनि राम्र्रोसँग भइरहेको पाईंदैन । कति त डिजाइन फेल भएको कारण अलपत्र परिरहेका छन्, कति ठेकेदारको चरम लापरवाहीले सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन् । यसलाई व्यवस्थित गर्न ठेक्कापट्टाहरु अनुगमन गर्ने संयन्त्र पनि अलि बलियो बनाउनुपर्छ । त्यस्तै सरकारी कर्मचारीलाई मनोबल बढाउने गतिविधि तथा प्रोत्साहनमूलक भत्ताहरुको व्यवस्था गर्नुपर्छ । ताकि उनीहरुले भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने बाध्यता र सोच नै विकास हुन नसकोस् ।
काे हुन् सन्दीप डाेटेल ?
सृर्जनशिल र जिज्ञासु स्वभावका सन्दीप डोटेल सानै देखि भवन, पार्क लगायतका भौतिक संरचना प्रति रुचि राख्थे । ती संरचना कसरी र कसले निर्माण गरे होलान् भन्नेमा उनलाई कौतुहलता हुन्थ्यो । यसै क्रममा एसएलसी पश्चात् प्लस टु पढ्ने क्रममा काठमाडौं बस्दै गर्दा यस्ता मनमोहक भौतिक संरचनाहरु आर्किटेक्ट बाट डिजाइन हुने कुराको जानकारी पाए । त्यसपछि इन्जिनियरिङ अन्तरगत आर्किटेक्चर विषय अध्ययन गर्ने मनसाय बनाएका उनले पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट वि.सं २०७२ मा आर्किटेक्चर अध्ययन पुरा गरे । ५ बर्षे आर्किटेक्चर कार्यक्रम पूरा गरेपश्चात् सरकारी सेवा या वैदेशिक रोजगारी तर्फ जानु भन्दा स्वदेशमा नै आफैं केही गर्ने हेतुले ‘ड्रिम डेभलपर्स प्रा.लि’नामक कम्पनी सञ्चालन गरी सो व्यवसायबाट अहिले १२ जना कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गरेका छन् ।
ड्रिम डेभलपर्सबाट हुँदै अाएका कामहरू
हाल ड्रिम डेभलपर्स प्रा.लि. नामक कम्पनीबाट इन्जिनियरिङ तथा आर्किटेक्चर सम्बन्धी आवश्यक डिजाइन, कन्सल्टिङ, कन्स्ट्रक्सन, सुपरभिजन, इन्टेरियर डिजाइन तथा शहरी योजना जस्ता विभिन्न कामहरु हुँदै आएका छन् । बहुप्रतिभाशालि युवा व्यक्तित्व सन्दीप डोटेलकाे नेतृत्वमा याे कम्पनी सञ्चालन हुँदै अाएकाे छ । हाल ‘जलवायु परिवर्तन र दिगो विकास’ विषयमा माष्टर डिग्री तहको अध्ययन गरी ‘क्लाइमेट स्मार्ट बिल्डिङ’मा थेसिस गरिरहेका डाेटेल नेपालमा छाेटाे अवधिमा नै इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा राम्राे चर्चा कमाउन सफल एक युवा उद्यमी हुन् । डाेटेलले याे कम्पनी स्थापना गरेकाे अहिले ४ बर्ष भयाे ।